सुपर स्पिनर |
यो पुरानो शैली स्लट यसको बारेमा पुरानो केही छ. सुविधा र पुरस्कार धेरै र प्रगतिशील Jackpot भरिएको, यो आफैलाई केही ठूलो रुपैया बनाउन रमाइलो र सजिलो तरिका हो. को गेमप्लेको साँच्चै चिल्लो छ र सुविधाहरू तपाईं नरमाइलो लाग्यो प्राप्त दिनु हुनेछ. तपाईं अझै पनि छैन यो आफ्नो पैसा राख्दै बारेमा निश्चित हुनुहुन्छ भने, तपाईं मा यो खेल्न सक्छन् मुक्त spins क्यासिनो कुनै जम्मा आवश्यक. तपाईं आफै दर्ता गर्न आवश्यक र खेल्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ.
सुपर स्पिनर स्लट को विकासकर्ताहरूले बारेमा
खाका गेमिङ एकदम व्यापार मा नयाँ छ तर तिनीहरूले उच्च गुणस्तरीय खेल आफ्नो लायक साबित गरेको छ. तिनीहरूले खेल बढाउन उत्कृष्ट रणनीति प्रयोग गरेका छन्, तिनीहरूले तपाईंलाई खेल्न अनुमति निःशुल्क spins क्यासिनो कुनै जम्मा आवश्यक र एक पटक प्राप्त यो एक टास्नु, यसलाई आफ्नो पैसा राख्न. खाका गेमिङ व्यापार मा लगभग सबै ठूलो नाम लागि विभिन्न खेल सफ्टवेयर विकास गरेको छ.
यो एक5रील र 10 ठीक लाइनहरु स्लट खेल. यो पनि एक प्रगतिशील Jackpot छ. डिजाइन तपाईं स्पिन जस्तै गर्नुपर्छ राम्री एक बैजनी डिस्को थिम्ड पृष्ठभूमि र तपाईं सबै विकल्प दिने लागि ठूलो स्पष्ट तल मा सानो बक्से संग बीचमा स्लट संग सरल छ, अटोप्ले, कुल जीत, paytable र शर्त रकम एक तीर द्वारा समायोजित गर्न सकिन्छ कि.
को रील मा प्रतीक पट्टी सहित क्लासिक हुन्छन्, एक्स र हे. को XS र बारहरू तपाईं संयोजन विजेता ओएस केही गर्न जबकि बनाउन. विशेष सुविधाहरू छन्:
फ्री Spins- को स्क्याटर प्रतीक एक '$' साइन छ. तपाईं 3,4or भूमि यदि5तपाईं प्राप्त payline यी प्रतीकहरूको 1,3 वा5क्रमशः निःशुल्क spins. तर यी थप घटनाहरू मा थप गर्न सकिँदैन र अधिकतम सम्म बनाउन सक्नुहुन्छ 50 मुक्त spins. पनि देशमा भने $ फेरि निःशुल्क spins समयमा, राउन्ड पुन: ट्रिगर हुन्छ।.
प्रगतिशील Jackpot- जब तपाईं भूमि यो रूपबाट5को रील मा Jackpot राजा प्रतीक. यो स्लट खेल Jackpot राजा प्रगतिशील Jackpot नेटवर्क जोडिएको छ. त्यसैले, तपाईं Jackpot राजा प्रतीक पाँच भूमि यदि, तपाईं स्पिन गर्न छुट्टै रील दिइनेछ. तपाईं crowns सङ्कलन गर्न. प्रत्येक मुकुट एक उच्च स्तर तपाईं हुनेछ. जब तपाईं संकलन गरेका छन् 15 crowns, तपाईं व्हील राजा पुग्नेछ. व्हील कताई ठूलो गुणक ग्यारेन्टी वा यदि तपाईं एक Jackpot त्यसपछि भाग्यशाली.
यो स्लट आफ्नो मोबाइल जस्तै अनलाइन सबै प्लेटफर्ममा खेल्न उपलब्ध छ, डेस्कटप वा ट्याब्लेट. तपाईं कुनै पनि मा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ निःशुल्क spins क्यासिनो कुनै जम्मा आवश्यक र धेरै तपाईं चाहनुहुन्छ रूपमा स्लट प्ले.
तपाईं एक शुरुवात हो र स्लट कसरी खेल्न कुनै विचार छ भने, यो खेल तपाईं प्रयास गर्नुपर्छ एक छ. यो स्लट कुनै पनि उपलब्ध छ निःशुल्क spins क्यासिनो कुनै जम्मा तिमी खेल्न को लागि आवश्यक. सरल गेमप्लेको र उच्च गुणस्तरीय ग्राफिक्स तपाईं मनोरंजन राख्न हुनेछ.